लिम्पियाधुरा र भारतबारे प्रचण्डले गरे ग म्भीर खुलासा, अब के होला ? – सजल सन्देश
लिम्पियाधुरा र भारतबारे प्रचण्डले गरे ग म्भीर खुलासा, अब के होला ?
By Sajal sandesh	 Dec 21, 2019
काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा र भारतबारे ग म्भीर खुलासा गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक टिप्पणी पठाएर अनेक प्रयास गर्दा पनि सरकारको कुरामा भारतले वास्ता नै नगरेको बताएका छन् ।
“नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे हामीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं । भारतको भ्रमणमा गएका बेला पनि यस विषयमा जानकारी गराएका छौं । पहलै नगरेको भने होइन । पुरानै समस्या भएकाले भारतले खासै चासो देखाएको छैन । तै पनि हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन् ।
धरानमा यायोक्खाको प्रशिक्षण
जनार्दन शर्मा भन्छन: सरकारी ठुला भवन मात्रै बने, सुकुम्बासीका घर खोइ ?